Cannabis Industry Coin စျေး - အွန်လိုင်း XCI ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Cannabis Industry Coin (XCI)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Cannabis Industry Coin (XCI) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Cannabis Industry Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
XCI – Cannabis Industry Coin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Cannabis Industry Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Cannabis Industry Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Cannabis Industry CoinXCI သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.187Cannabis Industry CoinXCI သို့ ယူရိုEUR€0.158Cannabis Industry CoinXCI သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.143Cannabis Industry CoinXCI သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.171Cannabis Industry CoinXCI သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.69Cannabis Industry CoinXCI သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.18Cannabis Industry CoinXCI သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.17Cannabis Industry CoinXCI သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.699Cannabis Industry CoinXCI သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.25Cannabis Industry CoinXCI သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.261Cannabis Industry CoinXCI သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.18Cannabis Industry CoinXCI သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.45Cannabis Industry CoinXCI သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.02Cannabis Industry CoinXCI သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹14.02Cannabis Industry CoinXCI သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.31.55Cannabis Industry CoinXCI သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.256Cannabis Industry CoinXCI သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.283Cannabis Industry CoinXCI သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.83Cannabis Industry CoinXCI သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.3Cannabis Industry CoinXCI သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥19.79Cannabis Industry CoinXCI သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩222.15Cannabis Industry CoinXCI သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦72.27Cannabis Industry CoinXCI သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽13.77Cannabis Industry CoinXCI သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5.18
Cannabis Industry CoinXCI သို့ BitcoinBTC0.00002 Cannabis Industry CoinXCI သို့ EthereumETH0.000469 Cannabis Industry CoinXCI သို့ LitecoinLTC0.0032 Cannabis Industry CoinXCI သို့ DigitalCashDASH0.0019 Cannabis Industry CoinXCI သို့ MoneroXMR0.00198 Cannabis Industry CoinXCI သို့ NxtNXT13.27 Cannabis Industry CoinXCI သို့ Ethereum ClassicETC0.0266 Cannabis Industry CoinXCI သို့ DogecoinDOGE54.69 Cannabis Industry CoinXCI သို့ ZCashZEC0.00194 Cannabis Industry CoinXCI သို့ BitsharesBTS7.14 Cannabis Industry CoinXCI သို့ DigiByteDGB6.45 Cannabis Industry CoinXCI သို့ RippleXRP0.629 Cannabis Industry CoinXCI သို့ BitcoinDarkBTCD0.00631 Cannabis Industry CoinXCI သို့ PeerCoinPPC0.617 Cannabis Industry CoinXCI သို့ CraigsCoinCRAIG83.47 Cannabis Industry CoinXCI သို့ BitstakeXBS7.81 Cannabis Industry CoinXCI သို့ PayCoinXPY3.2 Cannabis Industry CoinXCI သို့ ProsperCoinPRC22.98 Cannabis Industry CoinXCI သို့ YbCoinYBC0.0001 Cannabis Industry CoinXCI သို့ DarkKushDANK58.74 Cannabis Industry CoinXCI သို့ GiveCoinGIVE396.48 Cannabis Industry CoinXCI သို့ KoboCoinKOBO40.95 Cannabis Industry CoinXCI သို့ DarkTokenDT0.172 Cannabis Industry CoinXCI သို့ CETUS CoinCETI528.63
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 00:55:02 +0000.